Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – १५ अगस्त र हाम्रो देशभक्ति : मनमा उठेका केहि मिठा केहि तिता भावनाहरू
भोली १५ अगस्त भनेर आजै स्कूल युनीफर्म इस्त्री गरेर चिटिक्क पारेर, जुत्ता टिलिक्क टल्काएर, टाई ,बेल्ट , ब्याज र मोजाको दैनिक सफाई भन्दा पृथक लगनशिलताले विशेष तरिकाले तयार पारेर राख्थ्यौं हामी । मनमा एक प्रकारको हर्ष , खुशी , उत्तेजना र कौतुहलताले हामीलाई हावामा उड़ाई रहेको हुन्थ्यो । तिनताक मनोरञ्जनको साधन त्यती साह्रो नभएर होला यो दिन एउटा चाड़ सरह लाग्थ्यो । बिहान सखारै उठेर नुहाई धुहाई गरेर चाँडै स्कूल पुग्थ्यौं । कार्यक्रमको सरसामाग्रीहरू तयार पार्न र कार्यभार सम्हाल्नलाई स्कूलले छिटो बोलाएको हुन्थ्यो । स्कूल पुग्दाको क्षण साह्रै रमाईलो हुन्थ्यो । सबै बिध्यार्थी लगायत शिक्षक शिक्षिकाहरूको मुहारको चमक र उज्यालोपनले स्कूलको प्रांगन र परिवेश झनै उज्यालो बनाएको हुन्थ्यो । सर गुरूमाहरू पनि चिटिक्क कोट प्यान्ट र साड़ीमा सजिएर मगमग बासना आउने परफ्युम छरेर कार्यभार सम्हाल्दै एताउती दौड़धुप गर्दै गरेको दृश्य देख्दा मन साह्रै खुशी हुन्थ्यो र उमंग र जोशपूर्ण ह्रदयले कार्यभार सम्हाल्ने उर्जाको सृजना हुन्थ्यो ।
तिनताक क्षेत्रिय प्रशासन औ ठूला ठूला बिध्यालयहरूले स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा पालन गर्ने गर्थ्यो ।(यो संस्कृति अझै जीवित छ) विभिन्न स्कूलहरूलाई निमन्त्रण गर्दै विविध खेलकुद, सांस्कृितक कार्यक्रमहरूको आयोजना साथै प्रतिस्पर्धा राखिएको हुन्थ्यो ।
कार्यक्रम स्थल पुग्दा त्यो विशाल बिध्यार्थीहरूको, अभिभावकहरू र हेर्न आएका मानिसहरूको भिड़ देखेर झन् जोशिला हुन्थ्यौं । माईकमा बजेको देश भक्ति गीतहरू ‘हे मेरे वतन के लोगों…… , कदम कदम बड़ाये जा….. सारे जहां से अच्छा हिन्दुुसतां हमारा… सुन्दा शरीरको रौं ठाड़ो हुन्थ्यो ! बिध्यार्थीहरूको देशभक्ति कविताहरूले देश प्रतिको प्रेम र उत्सर्गको मार्ग प्रति मार्गदर्शन दिदै प्रेरणा र हौसलाले हाम्रो मन झनै जोशले भरिन्थ्यो ।
राष्ट्रिय झण्डा उचालेर शिर उठाएर परेड गर्दा छाती गर्वले फुलिन्थ्यो । विभिन्न स्कूलहरूको परेड ,ड्रील, झाँकीहरू , कोहि फौजी भेषमा देशको सिपाही बनेर प्रदर्शन गर्थे, कोहि देशको विभिन्न जातिय भेषभुसामा सजिएर बिध्यार्थीहरूले ‘विविधतामा एकता’ को प्रतीक हाम्रो देश जनाउँदै प्रस्तुति पेश गर्दथ्यो । प्रतिस्पर्धा जित्दाको खुशी र शिक्षकहरूले धाप मार्दा नाक फुल्लिएर धोक्रे नाक कसरी सम्हाल्ने जस्तो हुँदाको पलहरू झलझली यो आँखाहरू अगाड़ी नाच्दछन् । गाँऊ घरको कोठाको भित्ताहरूमा गाँधी, नेहरू र नेताजीको फ्रेममा सजिएका पोस्टरहरूले हाम्रो देश प्रेम र देश भक्ति झल्काउँदथ्यो । शिक्षकहरू र अभिभावकले हाम्रो कलिलो दिमागमा भरी दिएका राष्ट्रियता र देशभक्तिको पाठहरू हाम्रो मानसपटलबाट शायदै मिट्ला । देश प्रति हाम्रो मनको स्वच्छता, एकता, भातृत्व ,सदभावना ,उद्धारता ,ईमान्दारिता र देशभक्ति ती भव्य रूपमा आयोजित कार्यक्रमहरूले स्पष्ट रूपमा झल्काउँदथ्यो ।
स्कूलको एसेम्ब्लीमा उभिएर जन गण मन गाएको र नित्य स्कूलको प्रतिज्ञा (School Pledge)
India is my country.All Indians are my brothers and sisters. I love my country……………..
सम्पूर्ण बाल्यकाल र बिध्यार्थी जीवन भर यी राष्ट्रिय गान गाएर र नित्य प्रतिज्ञा गरेर सांच्चै गर्वले सोच्थ्यौं र भन्थ्यौं , ” म भारतीय हूँ । ”
धन्य ती शिक्षकवर्ग र अभिभावक जसले हामीलाई देश प्रेम औ देशभक्तिको पाठ पढ़ाए । र वर्तमान काल सम्म जीवित प्रथा र संस्कृति जसलाई वर्तमान पिड़ी र गुरूवर्गले निरनतर्ता दिएका छन् ।
मैले भने झैं हाम्रो पहाड़को संस्कृति अझै जीवितै छ । पहाड़मा स्वतन्त्रता दिवस जुन प्रकारले पालन गरिन्छ देशको अरू ठाँऊहरूले शायदै गर्छन् होला । देशको यो प्रमुख दिवस पालन गर्ने शैली ,शिष्टाचार, भव्यता शालिन्ता र आत्मियता अतुल्निय छ । घरदेखि बाहिर रहेर आफ्नो देशको र आफ्नो जन्मथलोको स्वतन्त्रता दिवस अवलोकन गर्ने उपाय सोसियल मिडिया बाहेक अरू केहि थिएन । दार्जीलिंग क्रोनिकलको हरेक अपडेट हेर्दै म पनि जोशिएर साथीहरूलाई “हाम्रो पहाड़को स्वतन्त्रता दिवस पालन गर्ने शैली हेर ” भन्दै देखाउँन चुकिन । बिध्यार्थीहरूको ती जोशिला प्रस्तुतीको फोटो हेर्दा मेरो खुशीको सीमा रहेन ।
तटास्थ प्रस्तुती हेर्न नपाउँनुको बाध्यताले खिन्न त भएकै हो तर धन्यवाद दार्जीलिंग क्रोनिकल र अहिलेको तकनिकलाई जसले पहाड़को कुनाकाप्चालाई समेटेर कार्यक्रमलाई हाम्रो आँखा अघाड़ी राखिदिए ।
भारतले सधैं झैं यसपालीको ७० औं स्वतन्त्रता दिवस पनि भव्य रूपमा पालन गर्यो । दिल्लीको लाल किला देखि लिएर देशको विभिन्न राज्यहरूमा ,शहर ,बजार गाँऊ बस्तीका बिध्यालयहरू,संघ संस्थाहरूले कुनै कसर छोड़ेन शायद देशको यो ठूलो दिवस मनाउँन । स्वदेशभित्र मात्र नभएर विश्व भरी छरिएर बसेका विदेशमा पनि भारतीयहरूले गर्वको साथ हर्ष र उल्लासपूर्ण रूपले मनाए । किन पनि नमनाउँनु त यत्रो ठूलो दिन जुन दिन अंग्रेजको क्रुर शासनदेखि मुक्त भएर भारत विश्वको मानचित्रमा ठूलो लोकतान्त्रिक गणराज्य बन्न पुगेको थियो।
भारतलाई १५ अगस्त १९४७ को दिन सम्म आईपुग्न हजारौं स्वतन्त्र सेनानीहरूको बली चड़ाउँनु परेको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । हजारौं देशभक्तहरूले आफ्नो ज्यानको आहूती दिएर शहीद भए र भारतलाई संप्रभुता दिलाउन रगत चुकाए ।भारतको कठिन संघर्षपूर्ण स्वतन्त्रताको सफरमा गोर्खा जातिको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । इतिहासको पन्नाहरूमा नलेखिएता पनि इतिहासको कालखण्डहरू साक्षी छन् । तर ती गोर्खा शहीदहरूको निम्ति ती कालखण्डहरू लाटा र अन्धो साक्षी सरह छन् । शायद बोलिदिने भए त हाम्रा सहिदहरूले पनि त्यो मुल्यांकनको भागीदार हुने थियो होला जस्तो अरूलाई दिईएका छन् । हाम्रा गोर्खा शहीदहरूको मुल्यांकन एक दुई वटा सालिकमा नै सिमित छन् तर इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिन छुटिएका पात्रहरू सरह बनेका छन् । सोसियल मिडियामा हरेक स्वतन्त्रता सेनानी औ सहिदहरूलाई श्रद्धांजलि दिनलाई हाम्रा भारतीय नागरिक र मंत्रीहरूले छुटाएनन् तर एउटा गोर्खा शहीदको नाम लिएनन् हाम्रा क्षेत्रिय मिडिया पेजहरू बाहेक । साह्रै दुख लाग्यो । हुन त मैले नसुनेको र नदेखेको हुन सक्छ तर मैले खोजे अनुसार कतै पाईन । दोष कसलाई दिनु र ? श्री महेन्द्र पी० लामाज्यूले भने जस्तै शायद हामीले आफ्नो इतिहास नै लेखेनौ ।
भारतीय सैनिकमा कार्यरत हाम्रा लाखौं गोर्खा दाज्यू भाईहरूले सीमामा तैनाथ देशको रक्षार्थ खटिएकाहरूले कति गोली खाएका छन् । कारगील युद्धमा कति शहीद भए । उच्च चोटिको हिमशिखर सियाचिन ग्लेसियरमा हिँऊको पहिरोले कति पुरिएनन् होला । भारत-पाक युद्धहरूमा ,भारत-चीन युद्धमा कति शहिद भए लेखाजोखा छैन । पहिलो-दोस्रो विश्व युद्धहरूको कुरा त नगरौं । अब हाम्रो गोर्खाहरूको बलिदानको सही मुल्यांकन औ सम्मान पाउँनलाई तेस्रो विश्व युद्ध पो पर्खिन पर्ला कि?
बोल्नेको पिठो नी बिक्छ भने जस्तो अब शायद हामी आफै डंका पिट्ने बेला आएको छ । इतिहासकारहरू जन्मनु पर्छ । शिक्षाविद , साहित्यकार, लेखक, पत्रकार लगायत राजनीतिक प्रशासन सबै कुम्भकर्ण सुताईबाट बिउँझने समय आएको छ । हामी सबैको एउटा ठूलो जमातले शायद हाम्रो गौरव र प्रतिष्ठा बचाउँन सक्छौं ।
तब मात्र हाम्रो गोर्खे शहीदहरूले सही श्रद्धांजलि पाउला ।
[In pic via: Re-ya Chettri, West Point school performing at the 70th Independence Day]
Gorkha Hill Football Association MadeaMockery of Centenary Herlihy Cup Final Darjeeling‬ Karate Team brought home3Gold and 1 Bronze Medal
237,659 total views, 301 views today
267,181 total views, 301 views today
283,411 total views, 301 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 283,428 total views, 301 views today Comments comments
283,428 total views, 301 views today
283,350 total views, 301 views today